गुल्मीका श्रीसको मृत्यु घटना किन गुपचाप ? – Everest Dainik – News from Nepal
गुल्मीका श्रीसको मृत्यु घटना किन गुपचाप ?
गुल्मी, साउन ११ । गुल्मीको एक गाउँपालिकामा जंगलमा मृत फेला परेका एक युवाको घटना छायाँमा पर्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका एक जना वडाध्यक्षका उमेदवारका छोराको जन्म दिनको रात्रीभोजमा राती १२ वजे सम्म देखिएका र त्यसको दुई दिन पछि त्यसै स्थल नजिकै जंगलमा मृत फेला परेका मालिका गाउँपालिका वडा नम्वर–१ का १७ वार्षिय यमहादुर श्रीस्को मृत्यु घटना गुपचाप भएको हो ।
आशंकको विउःपोष्टमार्टम नगर्नु